BIG BREAKING NEWS : अर्चना पनेरुको चमत्कारीक फड्को : बिग बोसमा प्रवेश !
Home/समाचार/BIG BREAKING NEWS : अर्चना पनेरुको चमत्कारीक फड्को : बिग बोसमा प्रवेश !
मुम्बई । भारतीय च्रचित रियालिटी शो बिग बोसको चालु संस्करणमा नेपाली मोडेल अर्चना पनेरु प्रवेश गर्ने हल्ला चलेको छ । अश्लील चलचित्र खेल्ने घोषणा गरेर चर्चामा आएकी पनेरुले सोही कारण नेपालको बसाई छोडेर मुम्बई लागेको बताईन्छ । अर्चना गत महिनादेखि आमासँगै मुम्बई बस्दै आएकी छिन । सामाजिक सञ्जालमा नग्न तस्वीर र भिडयो पोष्ट गर्न थालेपछि उनी चर्चामा आएकी थिईन ।
छेस्को र जिष्म चलचित्रमा अभिनय गरेपनि क्यारियर बनाउन नसकेकी अर्चना पछिल्ला समय राजधानीका विभिन्न डान्सबारमा काम गर्न थालेकी थिईन । चर्चा चले अनुसार, बिग बोसमा प्रवेश पाउन अर्चनाले मुम्कईमा कसरत गरिरहेकी छिन । शुरुआतमा नै प्रवेश पाउन खोजिएपनि उनले पहल गर्दासम्म प्रतियोगी छनौटको समय सकिएकोले वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री को माध्यमबाट प्रवेश दिन उनले निर्मातासंग पहल गरिरहेकी छिन ।
भारतमा समेत नेपाली शनि लियोनी भनेर चिनिने अर्चनालाई लिने या नलिने विषयमा भने केही आधिकारिक कुरा बिग बोसबाट सार्वजनिक भएको छैन । नेपालबाट हालसम्म एकजना महिला मात्रै बिग बोसमा सहभागी भएकी छिन । हाल जेल जीवन बिताई रहेका कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराजसंग बिहे गरेर चर्चा बटुलेकी निहिता विश्वास बिग बोसको सिजन ५ मा प्रवेश गरेकी थिईन । यद्दपी उनको प्रदर्शन भने खासै रहेन । उनी छोटो समयमा नै आउट भएकी थिईन । बिग बोसको यो सिजन जोडी विरुद्ध सिंगलको थिममा शुरु भएको थियो ।
अर्चनाका केही अबतारहरु
कृषि मन्त्रिलाई किसानको मागै माग
बलत्कारको घटना सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाउने पक्राउ
४२ माथि कारबाही सिफारिस, को-को पर्ने भए कारबाहीमा ?